Iindaba -Izibonelelo kunye nokungalunganga kweiglavu zoboya, iiglavu zesikhumba kunye neiglavu zomqhaphu ezishushu
Izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zeiglavu zoboya, iiglavu zesikhumba kunye neiglavu zomqhaphu ezishushu ezilungileyo? Ngokwempembelelo ye-thermal, iiglavu zoboya zingcono kancinci kuneiglavu zomqhaphu, kodwa zibuthathaka kancinci kuneiglavu zesikhumba. Kodwa ngoku kukho iintlobo ezininzi zeiglavu zoboya, kukwakho neiglavu zelaphu eliphambili, ifuthe elifudumeleyo lilungile kakhulu.
Izinto eziluncedo zeigloves zoboya: isitayile esityebileyo, ithambile kwaye iyaphefumla, ukufunxeka kwamanzi, kulula ukucoceka.
Ukungancedi kweiglavu zoboya: iiglavu zewulu ezilukhuni olunye zinomphumo wokugquma ngobushushu jikelele kunye nemingxunya yokuluka emikhulu.
Yeyiphi eshushu ngakumbi: iiglavu zomqhaphu okanye iiglavu zesikhumba
Iiglavu zesikhumba zingcono ekugcineni kushushu. Iglavu yesikhumba luhlobo oluthile lweglavu enesiphumo sokulondolozwa kobushushu, ngakumbi isikhuseli segusha esinomphezulu wesikhumba, nesiphumo esihle sokugcina ubushushu kunye ne-elasticity. Nangona ukusebenza kwe-thermal insulation yeiglavu zesikhumba ezingezizo kukubi, kungcono kuneiglavu zoboya.
Iiglavu zomqhaphu zitshiphu kuneiglavu zesikhumba, kodwa zishushu kancinane. Kodwa ngoku kukho iiglavu zomqhaphu, umphezulu ngumqhaphu, ngaphakathi ivelvet, umoya kunye nefuthe lokufudumeza ziphuculwe kakhulu.